အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: သက်ဆိုင်သူများ သို
အဲဒီအတွက် သူ့ကို ဝေဘန်ကြတယ်..၊
ဒီ Hot News ဆိုတဲ့ ဂျာနယ်က..
ဂျာနယ်မျက်နှာဖုံး မှာ တင်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်က.
တမင်ကို ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ထားမှန်းသိသာတယ်..၊
Hot News ဂျာနယ်က တာဝန်ရှိသူတွေရော
"NLD ကကောင်တွေ ဘုရားလိုကိုးကွယ် တဲ့ဒေါ်စု "
-ဒေါ်စုက တိုင်းပြည်မွဲနေတဲ့ ကာလမှာ..
-ဒေါ်စု သားတွေ သမီးတွေ..မြေးတွေကို..
-ဒေါ်စု PA က သေနတ်နဲ့ ခြိမ်းခြောက်လို့.
အရင်က ဘယ်သူတွေကို ဘယ်သူတွေက..
ခေါ်ခဲ့ ..ဖါးခဲ့ ဖူးဖူး မှုတ်ခဲ့တာ...သက်ဆိုင်သူတွေ..
ဘုရားလို ဘယ်သူ့ကို ဘယ်သူတွေက..
တာပေမဲ့ ရပိုင်ခွင့် အခွင့်ရေးကြောင့် ကိုးကွယ်တာ
NLD ကကောင်တွေ တင်မဟုတ်ဘူး..
ကိုယ်လိုချင်တာကိုပဲ Highlight လုပ်ပြီး..
သမိုင်းတရားခံဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့..
စကား. အထအနကောက်စေမဲ့ မျက်နှာဖုံးလေးကိုလဲ
Hot News က..ဟုတ်မလိုလိုနဲ့...
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 1:43 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook